မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Alessandra Schiavo နှင့်အဖွဲ့က နှစ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ယနေ့၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Alessandra Schiavo နှင့် အဖွဲ့က နှစ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄)၊ နေပြည်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Alessandra Schiavo က ပြောကြားရာတွင် -
• တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူနာများကို ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန်အတွက် လူနာတင်ယာဉ်များနှင့် လူနာတင်ရေယာဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးလိုပါကြောင်း၊
• ထို့အပြင် ရွေ့လျားဆေးအဖွဲ့များဖြင့် ပြည်သူများနေထိုင်ရာ နေရာဒေသများအထိသွားရောက်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများဆောင်ရွက်ပေးလိုပါကြောင်း၊
• ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နေရာဒေသများရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကိုလည်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင်သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးသွားလိုပါကြောင်း၊
• ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာသုံး ဓာတ်မှန်စက် (Tele-radiology)ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်မှန် ဆရာဝန်မရှိသည့် နေရာတစ်နေရာတွင် ရိုက်ထားသည့် ဓာတ်မှန်ကို အီတလီနိုင်ငံ ဓာတ်မှန်ပါရဂူများက အဖြေရှာစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်း ကိုလည်း နောင်အခါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားလိုပါကြောင်း၊
• ထိုသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများသည် မြန်မာ-အီတလီ နှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပင်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းကိစ္စရပ်များ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
• ယခုကဲ့သို့ နှစ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
• နာမကျန်းသည့် လူနာများကို ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ရွေ့လျားဆေး အဖွဲ့များဖြင့် ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာများအထိသွားရောက်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မွန်မြတ် ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊
• ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ရွေ့လျားဆေးအဖွဲ့များဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊
• လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လူနာမှတ်တမ်းများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ စသည်တို့ကို စနစ်တကျပြုစု၍ ဝန်ကြီးဌာနသို့လည်း ပေးပို့စေလိုပါကြောင်း၊
• အဆိုပါစာရင်းဇယား အချက်အလက်များကို ကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာနှင့် စီမံချက်များ ချမှတ်ရေးဆွဲရာတွင် အသုံးချဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ဝန်ကြီးဌာနတွင် စာရင်းဇယားသတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများကို ခေတ်မီ ကွန်ပျူတာစနစ်အား အသုံးချ၍ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊
• အီတလီနိုင်ငံကဲ့သို့ ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာသုံး ဓာတ်မှန်စက် (Tele-radiology) ဖြင့် အဖြေရှာစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းများကို မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရော၊ ဘီးလင်းနှင့် ချောင်းဆုံမြို့နယ် (၃)ခုတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်များအဖွဲ့ နှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါမောက္ခဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန) ဒေါက်တာတင်တင်လေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန) ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်ဇော်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ဆရာဝန်များအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမြင့်ဦး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။